Twitch ပေါ်မှာ Simp ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင် – Gaming Noodle
Simp ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ streamer များနဲ့ ဂိမ်မာများကြား နောက်ပြောင်ပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ ရေပန်းစားဆဲ စကားလုံးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Twitch ကတော့ ဒီစကားလုံးကို ယင်းတို့ရဲ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းကို အသစ်ပြုပြင်ထားတဲ့ Twitch ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ Simp ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူ တစ်ယောက်အတွက် အလွန်အကျွံ ပြုမူ (အဖြစ်သည်း) ပြခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ယင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်များအရ Twitch ဟာ Simp ဆိုတဲ့ စကားလုံးအပြင် Incel နဲ့ Virgin ဆိုတဲ့ စကားလုံးများကိုပါ အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်သွားမှာပါ။ ဒီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်များဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ စတင်အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းများအတွင်း Twitch ဟာ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ပြောဆို သူများရှိနေကြောင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ကြားခံခဲ့ရပြီးနောက် ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်းမှာတည်းက Twitch ဟာ ပလက်ဖောင်းပေါ်က အမုန်းစကား ပြောကြားသူ များနဲ့ နှောင့်ယှက်သူများကို ဖယ်ရှားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေအောင် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ပြောသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
Simp ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သက်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှောင်ပြောင်နှိမ့်ချတဲ့ စကားလုံးဖြစ်လို့ ယခုလို ပိတ်ပင်လိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်းကို Twitch ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Incel နဲ့ Virgin တို့ဟာလည်း အလားတူ ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားလုံးများဖြစ်တဲ့အတွက် ယင်းတို့ကိုပါ ပိတ်ပင်ရတာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
The logo for Twitch is displayed onalaptop computer in an arranged photograph taken in Little Falls, New Jersey, U.S., on Wednesday, Oct. 7, 2020. Twitch’s market share of hours streamed jumped to 91% in the third quarter, up 15% from the second quarter, according toareport from streaming-software provider Streamlabs, which used data from Stream Hatchet. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg
လက်ရှိမှာတော့ ဒီစကားလုံးများကို Twitch ပေါ်မှာ အသုံးပြုရင် ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်တွေ ပေးသွားမယ် ဆိုတာကို တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Simp ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အွန်လိုင်း streamer အသိုင်းအဝိုင်းကြား အလွန်ခေတ်စားနေတဲ့စကားလုံးဖြစ်တာမို့ Twitch ပေါ်မှာ ပိတ်ပင်လိုက်ရုံနဲ့ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ကတော့ ခက်ခဲနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။